Indlu encane b&b Giardini dell 'Ardo - I-Airbnb
Indlu encane b&b Giardini dell 'Ardo
Belluno, Veneto, i-Italy
Indlu encane ibungazwe ngu-Luca
U-Luca Ungumbungazi ovelele
Indlu Encane e-Giardini dell 'Ardo yigumbi elinezici ezihlukile. Ivalwe phezu kwendawo enhle ngokwemvelo, nokubukeka kwezintaba kanye nesigodi esijulile somfula we-Ardo. Ifasitela elikhulu likuvumela ukuba umbhede futhi ujabulele indawo enhle. Ifenisha ihlotshiswe kahle ukuze ukwazi ukwenza wonke umsebenzi endlini encane. Indawo inakho konke ukunethezeka: i-shower enkulu, i-wi-fi kanye ne-TV yesikrini esicaba. Ithala elisophahleni elinendawo yokubuka engu-360°.
Isakhiwo senziwe ngezinto zemvelo, isakhiwo senziwe ngokhuni futhi izindonga nemibhede yelanga yenziwa ngamabhola otshani avela kwezolimo eziphilayo. Ngakho-ke isakhiwo sisebenzisa amandla amancane kakhulu ngenxa yenani elikhulu lemibono.
4.92 · 196 okushiwo abanye
Idolobha elincane lase-Bolzano Bellunese litholakala ngaphandle (imizuzu engu-10 ngemoto) ukusuka edolobheni lase-Belluno. Ixhunywe kahle nesevisi yebhasi lomphakathi futhi ngesikhathi esifanayo ikuvumela ukuthi uhambe ngezinyawo ukuya e-Dolomites nase-Dolomites National Park. Isitolo sokudla esincane kodwa esinakho konke kanye nesitolo sezinto ezibhakiwe singafinyelelwa kalula ngezinyawo ukusuka endlini encane.
Umndeni wethu uhlala "endaweni eseduze", sizotholakala kuzo zonke izidingo (amacebiso okuhamba ngezinyawo nezindawo zokudlela) futhi sikunikeze ama-brioches afudumele nesinkwa esisha njalo ekuseni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Belluno namaphethelo